यो विधि/तरीका जाने याै;न क्रियामा दुबै जना पूर्ण सन्तुष्ट हुने पक्का – PathivaraOnline
Home > मनोरञ्जन > यो विधि/तरीका जाने याै;न क्रियामा दुबै जना पूर्ण सन्तुष्ट हुने पक्का
Bishal May 20, 2022 मनोरञ्जन 0
काठमाडौं । लामो समयसम्म शारीरिक सम्पर्क गर्नु कमालको कुरा हो, यसमा फोरप्लेले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
तर के तपाईलाई थाहा छ कि झटपट खाना खाँदा स्वास्थ्यलाई कसरी फाइदा हुन्छ ? त्यसैगरी धेरै पटक छिटो शारीरिकसम्पर्क गर्नु पनि स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ ।
यसबाट हाम्रो सम्बन्ध बलियो हुनुका साथै शारीरिक सम्बन्धमा पनि फरक आन्नद आउँछ ।
आत्मविश्वास बढाउनुको साथसाथै यसले तपाईलाई शारीरिक सन्तुष्टिको कलामा पनि विशेषज्ञ बनाउँछ । यदि तपाईलाई यस बारे धेरै थाहा छैन भने आज हामी यसबारे जानकारी लिएर आएका छौँ ।
यस बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त गरेर तपाई आफ्नो साथिलाई खुशी पार्न सक्नुहुन्छ ।तपाईलाई थाहा छ शारीरिक क्रिया आफैंमा आन्नद र सन्तुष्टिको विषय हो । तर जब यो छिटो हुन्छ, एड्रेनालाईन हडले तपाईलाई दोब्बर सन्तुष्टि दिन्छ ।
तपाईं यसको लागि कोठा, कुना वा भीडको बीचमा रहेको ठाउँ छनौट गर्न सक्नुहुन्छ ।
अनियमित शारीरिक सम्पर्कले तपाईंलाई धेरै आनन्द दिनेछ । अर्कोतर्फ, यदि तपाईंले भीड वा डरको बीचमा गर्नुभयो तर समातिनु भएन भने, त्यसको मजा तपाईंको कल्पना बाहिरको कुरा हो ।
यदि तपाईं आफ्नो छोटो समयको शारीरिक क्रियाबाट दुःखी हुनुहुन्छ, र आफ्नो आत्मविश्वास गुमाउँदै हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको लागि लाभदायक हुनेछ ।
यो तपाइँको आत्मविश्वास बढाउन र शारीरिक सम्बन्ध भएका सबै कुरा सामान्य बनाउनको लागि सबै भन्दा सजिलो तरीका हो । जति धेरै तपाईंले यो विधि प्रयोग गर्नुहुन्छ, राम्रो हुन्छ ।
वैज्ञानिकहरुको एक अध्ययन अनुसार हरेक दिन शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्ने मानिसहरु धेरै रचनात्मक हुन्छन् । दैनिक शारीरिक सम्बन्ध राख्दा तपाईको दिमागमा भएको अवरोध हटेर जान्छ । सोही समयमा, यसले तपाईंको मानसिक तनाव कम गरेर तपाईंको दिमागलाई थप खुला राख्छ ।
वैज्ञानिकहरुको एक अध्ययन अनुसार हरेक दिन शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्ने मानिसहरु धेरै रचनात्मक हुन्छन् ।
दैनिक शारीरिक सम्बन्ध राख्दा तपाईको दिमागमा भएको अवरोध हटेर जान्छ । सोही समयमा, यसले तपाईंको मानसिक तनाव कम गरेर तपाईंको दिमागलाई थप खुला राख्छ ।
यदि तपाईं शारीरिक सम्पर्कको लागि कम समय छनोट गर्नुहुन्छ भने, यसले तपाइँलाई सन्तुष्टि दिन सक्छ र तपाइँको शारीरिक सम्पर्कको कल्पना पूरा हुन सक्छ ।
छिटो शारीरिक सम्पर्क राख्नुले तपाईंलाई संवेदनशील बिन्दुहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छ, जुन तपाईंलाई अहिलेसम्म थाहा छैन ।
काम जस्तोसुकै होस्, बिस्तारै सबैले बुझ्छन् । हुनसक्छ आरामदायी क्षेत्रमा शारीरिक सम्पर्क गर्दा, तपाईलाई अझै सायद थाहा छैन कि तपाई वा तपाईको साथिलाई के मन पर्छ ।
यो विधिले तपाईंलाई त्यो चरणमा लैजान मद्दत गर्नेछ । यसका साथसाथै तपाईले आफ्नो शारीरिक क्रियाको कलालाई पनि थप विकास गर्न सक्नुहुनेछ ।
यदि तपाइँ शारीरिक क्रियाको कलामा निखार ल्याउन चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ निश्चित रूपमा त्यो व्यक्तिलाई धन्यवाद दिनुहुनेछ जसले तपाइँलाई यो विधिको बारेमा जानकारी गरायो ।
छिटो शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्दा स्वास्थ्यका लागि पनि धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा कमैलाई थाहा छ । छिटो हुने शारीरिक सम्बन्ध तपाईको मुटु, छाला र मांसपेशीका लागि धेरै लाभदायक हुन्छ ।
तपाईको छालाको चमक संगै तपाईको मांसपेशीहरु पनि लचिलो र बलियो हुन्छ ।
एक अनुसन्धानका अनुसार पटक–पटक शारीरिक सम्पर्क गर्ने दम्पती बढी आत्मविश्वासी र खुशी हुन्छन् ।
यो विधिले चाँडै हुने बुढ्यौलीको दरलाई पनि कम गर्छ ।
यही कारणले गर्दा आजको समयमा द्रुत शारीरिक सम्पर्कलाई युवावस्था र खुशीको प्रमुख स्रोत मानिन्छ ।
मोटरसाइकल टिपरमा ठो’क्किँदा एक जनाको मृ’त्यु
श्रीमान बिदेशमा मलाइ से,क्स बिना निन्द्रा नै लाग्दैन के गर्ने होला‘ ?
म’हिलालाई असाध्यै मनपर्ने पाँच आ’सनहरु (हेर्नुहोस